Kaddib maqnaansha afarta bilood ee Lius Suarez, Kooxda Barcelona oo diiradda saaratay labo Weeraryahan – Gool FM
Kaddib maqnaansha afarta bilood ee Lius Suarez, Kooxda Barcelona oo diiradda saaratay labo Weeraryahan
(Barcelona) 13 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay ee Lius Suarez ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo afar bilood ah kaddib markii qalliin looga sameeyey jilibka.
Suarez ayaa xanuun daran ka dareemay jilibka kulammadii ugu dambeeyey, iyadoo kooxdiisa Barcelona laga soo cirib tiray afar dhammaadkii Supercopa de Espana ee ka dhacay dalka Saudi Arabia waxaana soo reebtay Atletico Madrid.
Catalan ayaan heli doonin adeegga Suarez muddo afar bilood sida ay xaqiijisay, waxaana ay Barca ku qasbatan tahay inay suuqa ka soo ugaarsato laacibkii u dabooli lahaa booska 32-sano jirkaan.
Inkastoo kooxda ka dhisan garoonka Camp Nou ay u baahan tahay weeraryahan tayo leh oo ka caawiya tartankooda La Liga iyo Champions League, haddana ma awoodi karaan inay qarash badan ku bixiyaan xilligan jiilaalka.
Waxa ay xooggooda isugu geyn doonaan Lautaro, waxaase laga yaabaa inaysan ku guuleysan bartilmaameedkoodan sare, laakiin Barca ayaa weeraryahanka Inter haddii ay bishaan ku guuldarreystaan sugi doonta inay soo qaadato illaa suuqa xagaaga.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa heshiiskiisa lagu burburin karaa 111 milyan oo euro oo u dhiganta 95 milyan oo gini ama 123 milyan oo dollar, taasoo ka dhigan in heshiiska ay Lautaro kaga doonayso kooxda reer Talyaani uu bishaan ku adag yahay.
Laacibka LAFC ee Vela ayaa isagana la la xiriirinayey garoonka Camp Nou bishii Janaayo ee la soo dhaafay, magaciisa ayaana markale dib loola xiriirinayaa Barcelona.
Xiddiga xulka qaranka Mexico ayaa marar badan sheegay inuu jeclaan lahaa inuu dib ugu laabto horyaalka heerka koowaad ee Spain, wuxuuna xiriir fiican la leeyahay laacibka kooxda Barca ee Antoine Griezmann.
Isagu waa dookh kale oo u furan kooxda xafidanaysa horyaalka Spain, waana dhaliye qibrad leh, laakiin waxay qaadan doontaa dalab wayn si loogu qanciyo kooxda MLS-ka inay iska fasaxdo.
Sidoo kale Weeraryahanka kooxda la la xiriirinayo waxaa ka mid ah dhaliyaha Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani iyo Paco Alcacer, kaasoo ka tagay Barcelona si uu dareen ugu yeesho kooxda Borussia Dortmund.
Alcacer ayaana alabaabada u furay inuu markale ka ciyaaro Spain, maadaama uu ka war hayo in kooxdiisa reer Jarmal ay bishaan la soo wareegtay Erling Haaland oo ay ka soo qaateen Naadiga Red Bull Salzburg.
Maxay ka dhignayd saddexleeydii uu xalay saxiixay Weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero?
Kaddib Xavi waa kee macallinka kale iska diiday shaqada Kooxda Barcelona?